Deg deg: Guddoomiye Jawaari oo xanuunsanayo iyo wararkii ugu dambeeyey Xaaladiisa Caafimaad - Caasimada Online
Home Warar Deg deg: Guddoomiye Jawaari oo xanuunsanayo iyo wararkii ugu dambeeyey Xaaladiisa Caafimaad
Deg deg: Guddoomiye Jawaari oo xanuunsanayo iyo wararkii ugu dambeeyey Xaaladiisa Caafimaad
Muqdisho (Caasimadda Online) – Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, guddoomiyahii golaha shacabka ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa iska casilay xilkii uu hayey.
Guddoomiye ku xigeenka Koowaad ee golaha shacabka C/weli Muudey ayaa xildhibaanno saakay tagay golaha shacabka waxa uu ka hor akhriyey warqad uu sheegay in guddoomiye Jawaari isku casilay, islamarkaana uu u qoray madaxweyne Farmaajo.
Warar ay Caasimadda Online ka heshay guddoonka golaha shacabka ayaa xaqiijiyey in Jawaari uu is casilay kadib markii uu cadaadiska ku batay iyo isaga oo go’aansaday inuu ka tago dhaxal ah inaan la xumeyn waxqabadkiisa Shantii sano ee lasoo dhaafay.
Sidoo kale, warar lagu kalsoon yahay oo aan helnay ayaa waxay sheegayaan in mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari uu xanuunsan yahay.
Xanuunka guddoomiyaha ayaa la soo sheegayaa inuu ka dhashay cadaadiska siyaasadeed oo uu wajahayey maalmihii ugu dambeeyey.
Guddoomiyaha ayaan jiifan dhawr habeen, waana nin da’ ah, waxaana lasoo sheegayaa inuu aad u xanuunsanayo.
Buuq badan ayaa ka jiray mooshinkii laga keenay guddoomiyaha golaha shacabka, iyadoo goluhu uu Labo garab u kala qeybsamay.
Saakay ayeey xildhibaannada u ballansanaayeen in codka loo qaado guddoomiye Jawaari, hase ahaatee waxaa soo baxday warqaddan is casilaaddiisa ah.
Wixii warar ah ee kusoo kordha Xaaladda Guddoomiye Jawaari waan idinla socodsiin doona Inshaa Allah.